Nooca Sawirka | Martech Zone
Saturday, May 26, 2007 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Hiwaayadeyda ugu weyn ee koraya, markii aanan wax dhibaato ah qabin, ayaa sawiraysay. Xitaa waxaan qaatay dhowr sano oo koorsooyin qoris ah intii aan ku jiray Dugsiga Sare waana jeclaa. Waxay sharxi kartaa sababta aan had iyo jeer u haysto maqaallo ama qoraallo ku saabsan sawir gacmeedyada, Sawirqaade, sawirro iyo mowduucyo kale oo qaabeyn ah.
In kasta oo aanan awoodin inaan tarmo ama abuuro nashqado kaligey ah, waxaan aaminsanahay inaan u leeyahay dhadhan. Waan qodaa! Waa kuwan fiidiyow yar oo qabow oo ku saabsan qorista qorista people dad badan ma yaqaaniin dhammaan shaqooyinka gala naqshadaha xarfaha iyo sida ay muhiim u tahay doorka fartuhu ay ka ciyaari karaan farriintaada.
Hal qoraal: Kani waa fiidiyoow weyn oo sharxaya dhammaan sifooyinka font, laakiin runtii ma jecli farta ay ku isticmaalayaan fiidiyaha. Ma rabtay inaan kula wadaago mar walba! Habkaas marka aad rabto inaad u sharaxdo naqshadeeyahaaga inaad rabto meel bannaan inta u dhexeysa xarfaha, waad ku hadli kartaa afkooda oo waxaad dhihi kartaa, "Ma isku dayi karnaa inaan kordhinno xajmiga?"
Wax ka sheeg qaar ka mid ah astaamaha sifaynta:
Dhererka khadka - meeqa xarfood ayaa xariijin ka hor intaadan bilaabin bilowga.
Hogaaminta - masaafada udhaxeysa gundhigga hal xariiq qoraal illaa kan xiga.
stem - qaybta 'la beeray' ee astaamaha intiisa kale xarafka laga qoray.
Aasaaska - isku waafajinta salka xarfaha.
Ascend - qayb ka mid ah font-ka oo kor uga baxaysa dhererka dabeecad.
Dembiile - qayb ka mid ah font-ka oo hoos uga soo dhaca aasaaska.
Counter - booska cad ee ku lifaaqan qaabka warqadda.
serif - Naqshadeynta mid kasta oo ka mid ah joojinta astaamaha (sans serif micnaheedu ma ahan naqshad)
Waxaan ka raali gelinayaa xirfadleyda halkaas jooga ee sidan u sameeya nolol. Waxaan kaliya rabay inaan siiyo hordhac ku saabsan farta noocyada iyo qorista celceliska Marketer. Xor ayaad u tahay inaad garaacdo taladaada iyo sixitaanka sharaxahayga fudud.
Hitch iyo Suuqgeynta
Hordhac wanaagsan oo loogu talagalay bilowgayaasha. Qeexitaanka aad u isticmaashay "miiska" waxay noqon kartaa wax yar oo wareer ah. Qeexitaanka gaaban ee ugufiican ee aan maqlay waa? Booska cad ee ku lifaaqan xarfaha xarfaha.?
Mahadsanid Kevin! Waxaan ku cusbooneysiiyay qeexitaanka kooban talladaada.
Maashaa allaah! Wax fikrad ah kama qabin wax badan ayaa u galay naqshadeynta font. Runtii waan jeclahay font-ka cusub ee Microsoft ay ku isticmaasho Office 2007. Muddo ayaan u adeegsaday, ka dibna dib ayaan ugu soo laabtay Office 2003 waana u adkeysan waayey!
Dib u Cusbooneysiinta Webka
Jun 11, 2007 saacadu markay ahayd 12:10 AM
Haa waan ku raacsanahay Thore, waxaan u maleynayay inay wax fudud tahay. Ma aanan ogeyn inay shaqo badan tahay. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabahaas aan dhammaanteen u qaadanno. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka.
Marka xigta ee aan rakibo font waxaan hubaa inaan daqiiqad qaadan doono oo aan qadarin doono shaqadii abuurtay.